सेयर बजार Archives - Naya Patrika
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, ६ जेठ - गत साता लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिए । बजार सुस्त गतिमा चलेका कारण लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परी यस्तो रणनीति अपनाएका हुन् । बजार अघिल्लो सातादेखि सुस्त गतिमा तलमाथि गरिरहेको छ । यसले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको निर्णय गर्न गाह्रो भएको छ । तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणले लगानीकर्ताहरू थप अन्योलमा परेका हुन् । तेस्रो त्रैमासमा अपेक्षाअनुसारको वित्तीय विवरण...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, ४ जेठ - साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से सामान्य अंक बढेर बन्द भएको छ । अघिल्लो दिन पनि सामान्य अंक बढेर बजार बन्द भएको थियो । यस दिन बजार खुल्नेबित्तिकै तीव्र गतिमा उकालो लागेको थियो । कारोबारको एक घन्टामा यस दिन नेप्से १ हजार ३ सय ४७ बिन्दुमा पुगेको थियो । तर, सोही गतिलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, ३ जेठ - आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतापश्चात् बैंकका ग्राहकले नेपालभर रहेका एभरेष्ट बैंकका शाखामार्फत आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बिमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र एभरेष्ट बैंकका सहायक महाप्रबन्धक केशवराज पौडेलले...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ३ जेठ - गत आवको तुलनामा चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा मल्टिपर्पोज फाइनान्स कम्पनीको खुद नाफा घटेको छ । गत आवको सोही अवधिमा रू. ४३ लाख ३८ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको यस कम्पनीले चालु आवमा रू. ४२ लाख ३३ हजार मात्र नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा बढेपनि...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ३ जेठ - एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ९८ हजार २ सय ४६ दशमलव २० कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले फागुन १३ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन नपरेको साधारण सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । सो सेयर खरिदका लागि जेठ १० गतेदेखि...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ३ जेठ - विगत केही दिनदेखि सुस्ताएको बजारमा बुधबार केही रौनक देखिएको छ । गत साताको अन्तिम दुई कारोबार दिनदेखि ओरालो लागिरहेको नेप्से परिसूचक यस दिन सामान्य अंक बढेको छ । नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल केही बढेको छ । तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको थियो । लगानीकर्ताको...
रैराङको आइपिओ निष्कासन खुला
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १ जेठ - रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले वैशाख ३१ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि ८ लाख ४० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ । निष्कासन बन्द छिटोमा जेठ ३ गते र ढिलोमा जेठ २९ गते हुनेछ । कम्पनीले निष्कासन गरेका कुल ८ लाख ४० हजार कित्ता सेयरमध्ये ३३ हजार ६ सय कित्ता...
सूर्याको १०ः४ हकप्रद निष्कासन खुला
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १ जेठ - सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले वैशाख ३१ देखि १० बराबर ४ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय अंकित मूल्यका २८ लाख ८७ हजार ५ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । सो हकप्रद सेयरमा असार ३ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १ जेठ - साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत ओरालो लागेको छ । गत साताको अन्तिम दुई कारोबार दिनदेखि ओरालो लागेको नेप्सेले यस दिन पनि सोही गतिलाई निरन्तरता दिएको छ । बजार खुलेदेखि ओरालो लागेको नेप्से कारोबार अवधिभर बढ्न सकेन । तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीहरूले लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार नाफा आर्जन गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको...
डिप्रोक्सको नाफा १७ करोड ७५ लाख
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ३० वैशाख - चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकले १७ करोड ७५ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव ८८ प्रतिशत कम हो । खुद ब्याज आम्दानी सामान्य बढे पनि सञ्चालन मुनाफा घटेपछि बैंकको नाफा घट्न पुगेको हो । सो अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, ३० वैशाख - गतसाता नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । नेप्से ओरालो लागे पनि अघिल्लो साताको तुलनामा गतसाता कारोबार रकम करिब २८ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो साता तीन कारोबार दिनका लागि मात्र बजार खुलेका कारण कारोबार रकममा कमी आएको हो । गतसाता पाँचै कारोबार दिन बजार खुला रहेको थियो । गतसाता लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २८ वैशाख - साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक करिब ८ अंक ओरालो लागेको छ । बजार खुलेसँगै तीव्र गतिमा ओरालो लागेको नेप्से, कारोबारको एक घन्टा अवधिपछि सामान्य उतार–चढावमा रहेको थियो । कारोबारको अन्तिम एक घन्टा बाँकी हुँदा केही बढ्न थाले पनि सोही गतिलाई निरन्तरता भने दिन सकेन र पुनः ओरालो लागेर बन्द भयो । अधिकांश...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २७ वैशाख - बुधबार नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । नेप्से ओरालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी अएको छ । बजार खुलेको केही समयपछि ओरालो लागेको नेप्से, कारोबारको एक घन्टा अवधिमा यस दिनको न्यून बिन्दु १ हजार ३ सय ५२ मा पुगेको थियो । त्यसपछि उकालो लागेको नेप्से अन्तिम समयमा पुनः ओरालो लागेर बन्द भएको छ ।...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २६ वैशाख - मंगलबार नेप्से परिसूचक १५ दशमलव ६५ अंक बढेको छ । बजार बढेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ । सोमबार ४३ करोड बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस दिन भने ५० करोडभन्दा बढीको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार भएपछि लगानीकर्ताको मनोबल केही बढेको छ । बजार खुलेसँगै...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २४ वैशाख - साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १२ दशमलव ५१ अंक ओरालो लागेको छ । नेप्से ओरालो लागेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम ५२ दशलमव ९३ प्रतिशत घटेको छ । बजार खुलेदेखि सुस्त गतिमा ओरालो लागेको नेप्से, कारोबार अवधिभर...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २३ वैशाख - गत साता नेप्से परिसूचक करिब ९ अंक बढेको छ । सो साता पाँच कारोबार दिनमध्ये ३ कारोबार दिनका लागि मात्र बजार खुला रहेको थियो । मजदुर दिवस र बुद्ध जयन्ती–उँभौली पर्वका कारण सोमबार र मंगलबार बजार बन्द रहेको थियो । फलस्वरूप अघिल्लो साताको तुलनामा गत साताको कारोबार रकम घटेको छ...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २२ वैशाख - सेयर बजार परिसूचक नेप्से निरन्तर रूपमा ओरालो लाग्दा धेरै कम्पनीमा सेयर मूल्य सस्तिए । त्यसक्रममा केही कम्पनीको त प्राथमिक सेयर मूल्यकै नजिक पनि आइपुगे । तर, बजारमा केही त्यस्ता कम्पनी पनि छन्, जसको सेयर मूल्य अझै १० हजार रुपैयाँभन्दा माथि नै छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये तीनवटा कम्पनीको सेयर मूल्य...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २१ वैशाख - साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक ५ दशमलव ७७ अंक बढेको छ । नेप्से उकालो लागेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम दुई गुणा बढेको छ । बुधबार ३८ करोडको कारोबार भएको बजारमा यस दिन करिब ७७ करोडको सेयर खरिद–बिक्री भएको...
निर्धनको नाफा ३९ करोड ९१ लाख
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २० वैशाख - चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा निर्धन बैंक लिमिटेडले रू. ३९ करोड ९१ लाख ५१ हजार खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा १० दशमलव ७४ प्रतिशत कम हो । कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा र खुद ब्याज आम्दानी घटेसँगै खुद नाफा घट्न पुगेको हो । समीक्षा...
किसानको नाफा ६३ लाख
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २० वैशाख - चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले ६३ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५० दशमलव ९५ प्रतिशत कम हो । सो अवधिमा कम्पनी खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा घटेपछि कम्पनीको खुद नाफा घट्न पुगेको हो । सो अवधिमा...
नेप्से बढ्यो कारोबार रकम घट्यो
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २० वैशाख - दुई दिनको बिदापछि खुलेको बजार, बुधबार शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ । बिदा अघिका ५ कारोबार दिन निरन्तर आरोलो लागेको नेप्से, यस दिन बढ्दा लगानीकर्ताको मनोबल केही बढेको छ । यस दिन बजार खुलेको केही समयसम्म बढेको नेप्से, कारोबारको आधा घन्टा अवधिपछि घट्न थालेको थियो । मध्याह्नमा...
तेस्रो त्रैमासमा यस्तो छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १८ वैशाख - हिमालयनको नाफा १ अर्ब ६१ करोड चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैंकले रु. १ अर्ब ६१ करोड १८ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ९९ प्रतिशत बढी हो । सञ्चालन मुनाफा घटे पनि खुद ब्याज आम्दानी बढेसँगै खराब कर्जा संकलन गर्न...
कामना सेवाको अवितरित हकप्रद लिलाम बिक्री
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, १७ वैशाख - कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले ८ लाख ४९ हजार ९ सय ६३ दशमलव ७७ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । बिक्री गरिने सेयरमध्ये संस्थापक समूहको ६ लाख ३७ हजार ८ सय १६ दशमलव ९३ कित्ता रहेको छ भने सर्वसाधारण समूहको २ लाख १२ हजार १...
फरवार्डको लाभांश वितरण
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, १७ वैशाख - फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले १५ प्रतिशत नगद लाभांश (बोनस सेयर तथा नगद लाभांशको करसहित) वैशाख १६ गतेदेखि वितरण गरेको छ । कम्पनीले चैत ४ गते सम्पन्न साधारणसभाबाट पारित गरेको नगद लाभांश सेयरधनीको हितग्राही खातामा उल्लेख भएको बैंक खातामा जम्मा गरेको हो । कम्पनीको सेयर रजिस्ट्रार नबिल इन्भेष्टमेन्ट...
३६ प्रतिशत घट्यो कारोबार रकम
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, १७ वैशाख - साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक घटेको छ । नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको बजारमा यस दिन भने ४० करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । यस दिनको कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको...
२.११ प्रतिशत घट्यो नेप्से
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, १४ वैशाख - साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक २ दशमलव ११ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से घट्न पुगेको हो । बजार खुलेको १ घन्टा अवधिसम्ममा सामान्य उकालो लागेको नेप्से, सोपछिको अवधिमा भने ओरालो लागेको थियो । यसै साताको सोमबारदेखि नेप्से ओरालो लागेका कारण लगानीकर्ता अन्योलमा परेका...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १३ वैशाख - नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ९९ हजार ९ सय ४९ दशमलव ११ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । बिक्री गरिने सेयरमध्ये संस्थापक समूहको ४ हजार ६३ दशमलव ८७ कित्ता रहेको छ भने सर्वसाधारण समूहको ९५ हजार ८ सय ८५ दशमलव २४ कित्ता रहेको छ । कम्पनीले माघ...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १३ वैशाख - काबेली विकास बैंक लिमिटेडले वैशाख ११ गते अवितरित हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरेको छ । कम्पनीले चैत २७ गतेदेखि वैशाख ४ गतेसम्म सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत बिक्री गरेको सेयर बाँडफाँड गरेको हो । कम्पनीले संस्थापक समूहको ४५ हजार ३ सय ९१ कित्ता बाँडफाँड गरेको हो । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, १२ वैशाख - मंगलबार नेप्से परिसूचक करिब १६ अंक घटेको छ । ०७४ सालको अन्तिम दुई कारोबार दिनदेखि उकालो लागको नेप्से, सोमबार प्रोफिट बुकिङका कारण घटेको थियो । गत चैत २८ गतेदेखि वैशाख ९ गतेसम्ममा नेप्से परिसूचक १ सय ६८ दशमलव २६ अंक बढेको थियो । अघिल्लो दिन २७ दशमलव ६४ अंक घट्नु...
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, ११ वैशाख - साताको दोस्रो कारोबार दिन बजारमा करेक्सन देखा परेको छ । नयाँ वर्षको पहिलो कारोबार दिनदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको नेप्से यस दिन १ दशमलव ९२ प्रतिशत घटेको छ । नेप्से परिसूचक पछिल्ला ६ दिनमा करिब १ सय ६१ अंक बढेको छ । उच्च अंकले बजार बढेपछि लगानीकर्ताहरू यस दिन भने नाफा...
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १० चैत - नयाँ वर्षको पहिलो साता उत्साहजनक रुपमा बढेको नेप्से सोमबार दोहोरो अंकले घटेको छ । २७ दशमलव ६४ अंकले घटेर नेप्से परिसुचक १४ सय ११ दशमलव १५ मा झरेको हाे । पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा उत्साहजनक रुपमा बढेर हरियाली देखिएको नेप्से परिसुचक अचानक रातोमा झरेको छ । साताको पहिलो दिन ५०...
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, ९ बैशाख - साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से दोहोरो अंकले बढेर उछाल आएको छ । ५०.१८ अंकले बढेर नेप्से परिसुचक १४३८.४९ पुगेको छ । साताको अन्तिम दिन विहिबार नेप्से परिसुचक १३८८.५३ थियो । एक अर्ब २३ करोड बढीको कारोबार बजार बन्द हुन एकघण्टा बाँकी रहँदा नेप्से परिसूचक २६.५१ अंकले बढेकोमा पछिल्लो एक...